Golaha dastuuriga ee Soomaaliya ayaa waxa ay ansixiyeen dastuurka cusub shir hadda ka socda magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo warramay in laba. Berito oo arbaca ah, taarikhduna tahay afarta bisha Agoosto, Dalka Kenya waxa looga dareeri doono afti loo qaadayo dastuur cusub. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. جمهورية الصومال الفيدرالية. Dastuurka Ku-Meel Gaarka. La Ansixiyey August 1, MrHeishu, Soomaaliya .
Author: Taushura Guk
Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Cussub. Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma xad-gudbaan lamana qaybin karo.
Sida halkaas ka muuqata Zion waa eray Yuhuudi ah oo ay u yaqaanaan Jurisalaam. Dastjurka u Doorashada Madaxweynennimada waa in uu yahay: Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista. Iraq lawmakers criticise Trump visit as blow to Iraqi sovereignty December 27, Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Madaxweynaha waxaa uu xilka la wareegay kii. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka.
In la badalo dastuurka, waxay qeyb ka mid ahayd heshiis ay beesha caalamka taageertay, oo lagu soo afjaray rabshado uu dhiig badan ku daatay, oo ka dhashay doorasho natiijadeeda la ee khilaafay laba sanno ka hor.
Qodobka somalla — Afka Rasmiga ah 1. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana dasturuka midnimada Qaranka. Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyay qaybta A ee jadwalka koowaad, waalaydi buluug furan ah oo dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh.
Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay ka bilaabatay gudaha Soomaaliya ayaan baaritaan ku sameynay haddii uu jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku wata, natiijada waxaa ay noqotay in caalamka laga diiday ruux labo baasaboor leh in uu dal hogaamiyo.
Gabadha qortay dastuurka Soomaaliya waxay rumaysan tahay dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee la yiraahdo Rastafari.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Qodobka daztuurka — Gobannimada Jamhuuriyadda 1. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud.
Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa. Waxaa uu sidoo kale sheegay in dastuurka cusub uu mideyn doono dalka, dhowri doono xuquuqda muwaadiniintiisa oo uu na gacan ka geysandoono keenidda xasilooni siyaasadeed.
Fatuma Gedi breaks silence on fake sex tape as suspect arraigned in court December 28, Waxaana cadaatay hada in lasoo bandhigay Dastuurkii runta ahaa ee ay qortay gabadha Jamayka u dhalatay iyo ninkeeda Itoobiyaanka ah, waxana hada la qorshaynayaa in Dastuurka Soomaaliya lagu daro in diinta Kirishtaanku ay ka mid tahay diimaha rasmiga ah ee Soomaaliya.
Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1. Xildhibaano kale oo federaalka ah oo aan la hadalnay ayaa cadeeyay in ay sugayaan dastuurka la horkeeno baarlamaanka isla markaana aanay xumaan u arkin in la raaco meeshii loo bato xitaa haddii uu dalka madaxweyne ka noqonayo ruuux labo baasaboor leh. Cidda qortay Dastuurka qabyo-qoraalka Soomaaliya loo diyaariyay. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka. Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Sections of this page. Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Somaliw scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada.
Man to watch in December 27, Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Kenya, halganka xooggan oo lagu doonayey in lagu badallo dastuurka, ayaa ka socday tan iyo horaantii sagaashameedyadii, tiina afti loo qaaday dastuur cusub ayey shacabku diideen.
Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, 8 iyo naad, kadibna guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka soo jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si qodob walba xildhibaan u ansixiyaan.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan.
Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu sheegay Abril. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Ajnabi dalka waa ka noqon karaa madaxweyne Qorshe Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Hase yeshee, habkan ma aha hab federaal ah, oo waxaa weli inta badan go’aanka yeelanaya dowladda dhexe ee uu hoggaaminayo madaxweynaha, xubanaha loo magacaabayo golaha cuaub, waxay ka imaan doonaan baarlamanka dibadiisa.
Waxaana diintan Rastafari dadka rumaysan ay qabaan in boqortooyadii Itoobiya ee uu ugu dambeeyay Xeyle Salaase ay kasoo bilaabatay boqor Nabi Sulaymaan calayhi salaam, oo ay u yaqaanaan inuu yahay Yahuudi. Waxaa ay shuruudda ku dareen in uu ka dhashay qabiillada dalka degan, weli in uu Afrikaan asal ah yahay. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Waxaana soo shaacbaxay beryahan in xataa laga qariyay Dastuurkaan gudigii madaxa banaanaa oo hada sheegay in dastuurka lasoo bandhigay uu ka duwan yahay midkii markii hore dastuudka gacanta ku hayeen.
Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan dsstuurka muddo xileed marka la fiiriyo u dastuirka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa loo dooran karaa xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda muwaaddin kastoo Soomaaliyeed, Muslim ah, aabihiis iyo hooyadiis Soomaali asal ah yihiin, horay an u gursan, inta uu xilka hayana guursanin qof aan Soomaali asal ahayn.
Doorashadii ugu dambeysay ee da ka dhacday Kenya, waxaa ka dhashay rabshado cuusub 2 bilood, oo ay ku dhinteen in ka badan qof. Soomaalidu horay ugu maahmaahday somzlia booli ahi, nirig xalaal ah ma dhasho” Hadaba yaa dhalay dastuurka qabyo-qoraalka ah? Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: